Thursday July 15, 2021 - 11:59:45 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Munaasabad ka dhacday magaalada Talaabiib uuna kasoo qeyb galay madaxweynaha Yahuudda ayaa xarigga looga jaray dhismaha safaaradda Imaaraatka Carabta ee Israa'iil.
Max'med Alkhaaj oo ah safiirka cusub ee UAE uqaabilsan Yahuudda ayaa kalimad uu jeediyay ku sheegay in tani ay tahay markii ugu horraysay oo dalkiisu uu matalaad rasmi ah ku yeeshay Israa'iil.
Calanka dowladda Imaaraatka Carabta iyo midka Yahuudda ayaa layska hareer suray, tani waxay ka dhigantahay aqoonsi rasmi ah oo Imaaraatku uu siiyay Kiyaanka Yahuudka isagoona wax aan jirin kasoo qaaday qadiyadda Falasdiin.
isqab qabsi dhanka maamulka ah oo ka jira degmada Buula Burde.
Ciidamo ka gadooday maamulka 'Puntland' oo isbaarooyin dhigtay deegaan katirsan Mudug.
Sarkaal katirsanaa sirdoonka maamulka 'Jubbaland' oo Kismaayo lagu qarxiyay.
Mas'uul katirsan maamulka degmada Afgooye oo weerar qorshaysan lagu dilay.